Nala soo xiriir - BullyingCanada
/ Nala soo xiriir
Waxaan jeclaan lahayn inaan war kaa maqalno!
Fadlan xor u noqo inaad fariin noogu soo dirto-waanu kugu soo celin doonaa sida ugu dhakhsaha badan.
Ma rabtaa in la soo diro?
In laga saaro BullyingCanadaLiiska diritaanka tooska ah, fadlan halkan guji:
Vancouver, British Columbia, V6H 3X8
Fadlan ogow: BullyingCanada ma aqbalo soo-booqdayaasha. Cinwaanadan waxaa loogu talagalay boostada oo kaliya, haddii aad u baahan tahay inaad wax ku soo dirto fadlan la xiriir adigoo isticmaalaya email.